စီမံကိန်း (သို့မဟုတ်) အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု | MoeMaKa Burmese News & Media
(လက်ပံတောင်းကို ဖတ်ရှုခြင်း အပိုင်း ၆)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ရသဆောင်းပါးစုံ, အခန်းဆက်များ, မောင်လူရေး
One Response to စီမံကိန်း (သို့မဟုတ်) အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု
Htwe on April 4, 2013 at 5:22 am
You are absolutely right. They talked about MeitTeLar to get cover about Letpantawn. Amay Suu is not careless person, so she would be read about the report. If something is underneath?